अर्थ/वाणिज्य Archives - Page4of 132 - A complete Nepali news portal based on news & views
काठमाडाैं । जनशक्ति, लागत र समय समेत कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय झापामा साना कृषि औजारको प्रयोग बढ्दै गएको छ। मानवीय श्रम साधन अभाव भइरहेको अवस्थामा साना कृषि औजारको प्रयोग गरेर खेती हुन थालेपछि यहाँका किसान आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। ‘पहिले पहिले परम्परागत तरिकाले खेती गर्थ्यौं, त्यसले जनशक्ति र लागत बढी लागेपनि उत्पादन कम हुन्थ्यो’, […]
काठमाडौं । दसैँको लागि मुस्ताङवाट ल्याइएको च्याङ्ग्राको मूल्य यस वर्ष अत्यधिक बढेको छ । नेपाल ट्रष्टले ल्याएको च्याङ्ग्रा दुई हजार ५०० च्याङ्ग्रा र करिब दुई हजार खसी बोका बिक्रीका लागि ल्याइएको छ । सोमबारदेखि खरीदका लागि ग्राहक आए पनि बुधबार बिहानैदेखि च्याङ्ग्रा, खसी, बोका खरिद गर्नका लागि ग्राहकको भीड लागेको छ । भक्तपुर जिल्लाका मात्रै […]
काठमाडौँ । सरकारले फलामे छडमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाएसँगै फलामे छडको मूल्य घट्ने भएको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादन संघले स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट भएसँगै मूल्य घट्ने जनाएको हो । संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघमा आवद्ध उद्योगलाई प्रतिकिलो रु चार मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको हो । बजेटमा नै […]
ललितपुर रेण्टल क्याटरिंग, पार्टी प्यालेस संघको ११ औ बार्षिक सभा तथा छैठौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार भएको सो सभाका प्रमुख अतिथि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिह्री बाबु महर्जनले रेण्टल क्याटरिंग तथा पार्टी प्यालेस ब्यबसाय ब्यबसायिक क्षेत्रमा अभिन्न स्थान ओगटेको बताए । नेपाल रेण्टल क्याटरिंग तथा पार्टी प्यालेस महासंघका अध्क्षय लिला बहादुर जिसीले राज्यले क्याटरिंग तथा […]
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार २२:१० September 28, 2021 Nonstop Khabar
काठमाडौँ। शेयर बजारमा लगातार ओरालो लागिरहेका बेला मंगलबार पनि उच्च गिरावट आएको छ । यसदिन बजार मापक परिसूचक नेप्सेमा ७०.०१ अंकको गिरावट आएको छ । मंगलबार कारोबारका लागि बजार खुलेदेखि लगातार ओरालो लागेको बजार ३ बजे कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक २६१५.४० को बिन्दुमा झर्‍यो । यस्तै राम्रा कम्पनीहरुको बजार मापक परिसूचक सेन्सेटिभ पनि ११.४२ […]
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटामा ७०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कूल वस्तु व्यापार घाटामा आव २०७७/७८ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । सो आवमा त्यस्तो घाटा २२.२ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू […]
७ आश्विन २०७८, बिहीबार १३:३७ September 23, 2021 Buddha Sharan
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य घटेको छ ।अघिल्लो दिन प्रतितोला नौ सयले बढेर ९० हजार १ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ६ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज तेजावी सुनको मूल्य ८९ हजार १५० रहेको छ ।
३ आश्विन २०७८, आईतवार २०:१३ September 19, 2021 Nonstop Khabar
बुटवल, ३ असोज । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका एक हजार ४०० वटाभन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक आयोजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट गुमेको […]
चितवन : पोल्ट्रीको राजधानी चितवनमा नयाँ दाना उद्योग भुषाल फिड ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. सञ्चालनमा आएको छ । विगत डेढ दशकदेखि पोल्ट्री क्षेत्रमा नै सक्रिय व्यवसायी रामलाल भुषालको एकल लगानीमा भुषाल फिड ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. सञ्चालनमा आएको हो । भुषाल फिड ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को उत्पादनमा “ भुषाल मास दाना” व्राण्डमा उच्च गुणस्तिरीय भएको पोषणयुक्त दाना उत्पादन सुरु गरेको अध्यक्ष […]
३० भाद्र २०७८, बुधबार २०:०५ September 15, 2021 Buddha Sharan
काठमाडौं। बजारको माग भन्दा कम सुन आपूर्ति भएको भन्दै सुनचाँदी ब्यवासयीहरुले आपूर्ति बढाउन माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवासायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर आपूर्ति बढाउन आग्रह गरेको हो । ब्यबसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यको टोलिले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेललाइ भेटि बजारमा सुन अभावका […]